Fanambarana mahery vaika ho an'ny 2021 | TOKO VAVAKA
Home vavaka Fanambarana mahery vaika Nandritra ny 2021
Androany isika dia hiatrika fanambarana mahery vaika amin'ny 2021. Milaza ny soratra masina, manambara zavatra iray, dia ho tanteraka izany. Manana fahefana be dia be isika izay mitoetra ao am-bavantsika. Tsy mbola novakinareo va ny teny ao amin'ny soratra masina manao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Na inona na inona fehezinareo etỳ an-tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanareo etỳ ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra. Manana fahefana hanao sy mamolavola amin'ny lelantsika isika.
Hivavaka am-bavaka mahery vaika isika ho an'ny taona 2021. Amin'ny teny aloaky ny vavantsika dia hamolavola ny volan'ny taona isika.
Rehefa hifarana ny taona 2020 dia be dia be ny zavatra miseho manodidina. Na dia taona tsara indrindra ho an'ny sasany aza ity dia tsy afaka miteny mitovy ny hafa. Saingy, ny taona 2021 dia vaovao vaovao. Betsaka ny fitahiana mety ho ao anatiny. Ary koa, ho be ny loza. Na izany aza, milaza ny soratra masina fa fantatro ny eritreritro momba anao; ireo no eritreritra ny tsara fa tsy an'ny ratsy hanome anao ny fiafarany antenaina.
Raha betsaka ny fitahiana dia misy koa ny olana. Avela ho antsika ny hitaky ireo tso-drano sy hisorohana ny ratsy tsy hanakaiky ny toerantsika. Azo tanterahina izany amin'ny alàlan'ny vavaka. Hanao andiam-bavaka fanambarana isika mba hanana fotoana lehibe amin'ny 2021. Tsarovy ny soratra masina milaza fa raha misy olona miteny, dia avelao izy hiteny tahaka ny tenin'Andriamanitra. Hanao fanambarana eo amin'ny fiainantsika ho oracle avy amin'Andriamanitra isika. Manome didy aho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, rehefa manomboka mampiasa ity torolàlana momba ny vavaka ity isika, enga anie ny fitahian'Andriamanitra Tsitoha ho tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fanomezana fiainana, misaotra anao aho noho ny fofonain'ny andro vaovao sy taom-baovao, Tompoko, hisandratra anie ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, mandidy aho fa ny fahefana sy ny fahefana rehetra izay nivoady fa hampahory ahy ny taona 2021, dia manambara ny fahafatesan'izy ireo aho anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, apetrako amin'ny herin'ny fiainana mandrakizay ny herin'ny maizina rehetra amin'ny fanandevozana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga hanohitra ny drafitry ny fahavalo aho handrava ny drafitr'Andriamanitra mandritra ny fiainako; Ariako amin'ny afo anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, manapa-kevitra aho fa ny taona 2021 dia ho tsara kokoa noho ny taona 2020 amin'ny fanovana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Manana ny zavatra rehetra tsy azoko tamin'ny taona 2020 aho; Mahatratra izay tsy vitako tamin'ny taona 2020 tamin'ny anaran'i Jesosy aho.
Ry Jesosy Tompo ô, manokatra ny varavarana rehetra ho ahy amin'ny taona 2021 amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ny varavaram-pivoarana rehetra, ny varavaram-panandratana rehetra izay nakaton'ny fahavalo hanohitra ahy tamin'ny taona 2020, dia novakiko teo alohako tamin'ny 2021, tamin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, manapa-kevitra aho fa ny hery sy ny fahasoavana hanao fanararaotana lehibe kokoa dia natolotra ahy anio amin'ny anaran'i Jesosy. Manendry ny tenako ho amin'ny faritry ny fahalehibiazana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tonga hamely ny hery famerana rehetra aho; ny fihenan-javatra rehetra mety hitranga hanohitra ahy dia potehiko eo anatrehako amin'ny anaran'i Jesosy.
Napetrako tao amin'ny fikarakaranao Jesosy Tompoko ny fanambadiako; tsy misy drafitra ratsy na fandaharam-potoana haharesy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga nanohitra ny fikasan'ny fahavalo rehetra hanaparitaka ny fanambadiako tamin'ny 2021 tamin'ny afon'ny fanahy masina aho.
Tompoko, manapa-kevitra aho fa tsy misy olona, ​​goavambe na devoly afaka hijoro amin'ny lalako amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, mandidy aho fa misy lanitra mangataka ho ahy amin'ny 2021. Ny soratra masina dia milaza fa ny Andriamanitro dia hanome ny zavatra ilaiko rehetra araka ny haren'ny voninahiny amin'ny alalàn'i Kristy Jesosy. Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hofenoina ny zavatra ilaiko amin'ny taona 2021 amin'ny anaran'i Jesosy.
Manambara ny fanasitranan'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba inona na amin'ny herin'ny devoly aza ny fahasalamako dia manapa-kevitra amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny tanan'Andriamanitra manasitrana dia tonga amiko ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy aho; ny vatako dia tsy ho fonenan'ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra fa Kristy no nitondra ny rofiko rehetra ary nahasitrana ny aretiko rehetra. Ny herin'Andriamanitra dia manafoana ny drafitra rehetra ataon'ny fahavalo hamely ahy amin'ny aretina mahatsiravina amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ambarako fa ny fankasitrahan'Andriamanitra Tsitoha dia hanaloka ny fiainako amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Baiboly dia milaza fa raha sitrak'Andriamanitra ny fomban'ny olona, ​​dia mahazo sitraka eo imason'ny olona izy. Mandidy aho fa ny lanitra sitraka dia hisokatra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, manome didim-pitsarana aho fa ny famindram-pon'Andriamanitra Tsitoha izay mihoatra ny fahazavan'olombelona dia hanaloka ny fiainako amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny varavarana rehetra izay nakatona vokatry ny fahotana, dia mivavaka aho mba hosokafan'ny famindram-pon'Andriamanitra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Miresaka ny fampiroboroboako amin'ny fisehoana amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ny fampiroboroboana izay mendrika ahy sy ilay tsy mendrika ahy dia ataoko amin'ny fahasoavan'ny Avo Indrindra naseho tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ataoko amin'ny anaran'i Jesosy ny olana ara-panambadiana rehetra. Amin'ny 2021 dia hahita ny taolan'ny taolako sy nofon'ny nofoko amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ilay lehilahy na vehivavy notendren'Andriamanitra ho mpiara-mitory amiko dia hahita ahy amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra, manapa-kevitra aho fa ny taratasy fanendrena ahy dia navoaka tamin'ny 2021 tamin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny asa nofinofiko dia natolotra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, mamoaka didy amin'ny famindram-pon'ny Avo Indrindra aho, omeo fitsaharana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahiko. Mandà tsy ho sahirana aho amin'ny 2021; Tompo ô, omeo fitsaharana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahiko.
Mandidy ny fahombiazana amin'ny zavatra rehetra apetrako amin'ny 2021 amin'ny anaran'i Jesosy aho.
vavaka ho an'ny 2021
Previous lahatsoratraVavaka ho an'ny fitarihana masina sy fitarihana amin'ny taona 2021
Next lahatsoratraVavaka mahery vaika amin'ny fahagagana isan'andro
LARKAY Tarnue Gbotolu 4 Febroary 2021 Amin'ny 11:20 maraina
Ny Vavaka ho an'ny firenena amin'ny Sierra Leone
20 Fanolorana Vavaka ho an'ny fanafahana amin'ny fiarovana ny fanambadiana